Shabaab ayaa soo bandhigay Saraakiil iyo askar kuwooda ah oo xiran dharka Ciidamada Dowladda Somaliya, gaar ahaan kuwa la biixyay xiliyadii udanbeeyay. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Shabaab ayaa soo bandhigay Saraakiil iyo askar kuwooda ah oo xiran dharka Ciidamada Dowladda Somaliya, gaar ahaan kuwa la biixyay xiliyadii udanbeeyay.
Allhadaaftimo August 22, 2018 Uncategorized
Degmada Jilib ee Gobolka Jubada Dhexe oo kamid ah meelaha ay heystaan Shabaab, ayaa waxaa ka soo muuqday dagaalaamayaal Shabaab ah iyo Saraakiishooda oo xiran dharka Ciidanka Guutada 14-ka October, Ciidankan waxaa la sameeyay Kadib weerarkii ay ku dhinteen dadka ka abdan 500 ee qof ee 14-kii October ka dhacay Isgoyska Zoobe ee Muqdisho.
Sheekh Maxamed ABuu Cabdalla oo ah Gudoomiyaha Shabaab ee gobolada Jubooyinka oo boqolaal Shacab ah Shalay la tukaday Salaadii Ciida, ayaa xirnaa dharka Guutada 14-ka October, Sidoo kale waxaa googbta joogay Dagaalamayaal iyaguna xirnmaa dharkaas.
Shabaab ayaa sidoo kale Jilib ku soo bandhigay Gaadiid isugu jira kuwo ay ka qaateen Ciidamada Kenya iyo kuwa Dowladda Somaliya, kadib weeraro gaadmo ah oo ay ku qaadeen saldhigyadooda.
Si Kastaba, lama oga sida Shabaab ugu suura gashay iney helaan dharkii ugu danbeeyay ee loo qeybiyay Ciidamada Dowladda, gaar ahaan kuwa la sameeyay Bishii 10-aad ee sanadii hore kadib, oo aan jirinba wali Mudo sanad ah.
Janaraal Maxamed Nuur Galaal oo kamid ahaa saraakiishii Ciidamada xooga dalka, ayaa ku sheegay sababta usuura galisay Shabaab iney helaan dharka Ciidamada ay tahay, Iyagoo xoog ku soo furta dharkaas iyo saanadaha milatari marka ay weeraraan fariisimaha Ciidamada iyo xarumaha kale ee Dowladda.
Dad kale, ayaa qaba iyaguna in Shabaab dhaqaale xoogan ku bixiyaan sidii ay uheli lahaayeen dharka Ciidamada Dowladda ee la bixiyo xiliyadii udanbeysay.
Dowladda Somaliya, wali kama hadal dharka la soo bandhigay ee Saraakiisha Shabaab wataan, waxaase arintan ay soo shaac baxday markii Shabaab ay weerareen Madaxtooyada SOmaliya Bishii June ee sanadan oo shabaabkii weeraraka qaaday ay wateen dharka Ciidanka.
Waxaa jirtay in Dowladda Somaliya ay saraakiil uxir xirtay Weerarkaas, waloow aan dib danbe loo soo bandhigin halka ay ku dnabeeyeen Saraakiisha la xiray.
Previous Madaxii ugu sareeyey Sirdoonka dalka Itoobiya Getachew Assefa oo uu xilka ka qaaday Ra`iisulwasaaraha dalkaas Dr Abiy Ahmed ayaa hadda iska dhiibay dalka Suudaan,
Next laamaha amaanka ee Somaliland ayaa gacanta ku dhigay xubno sare oo ka tirsan xukuumaddii Cabdi Maxamuud Cumar ee talada maamulka Killilka shanaad laga wareejiyay oo si qarsoodi ah gudaha Somaliland kusoo galay, isla markaasina uga baxa islahaa.